Transmogrification ku Paladin inikeza engcono amasethi ezibukwayo kule ekilasini kanye ukuyikhokhela yabo. Inombolo ephelele amasethi kuziwa amakhulu izingubo, kodwa phakathi kwabo kukhona amasethi amabili ahlukene enhle nokuduma.
Transmogrification ku paladin nezinye izinhlamvu inikeza iqoqo zempi ezivela anezele odlule kanye nokusetshenziswa yabo njengoba imaging. NPC Special unesibopho le nqubo. Engxoxweni naye kuzovula iwindi ekhethekile lapho wonke amaseli ufuna ukufaka ingxenye isethi ubudala. Ukuze ethile ku transmogrification paladin noma izinhlamvu nezinye amakilasi zizokwenzeka imizuzwana embalwa nje. Lena indlela kuphela ukushintsha ukubukeka izinhlamvu.
I amasethi phambili paladin
Ngokusho bonke abasebenzisi abake ku "World of Warcraft" umdlalo transmogrification ezenziwe Paladin, "Zempi wobulungisa 'kukhona amahle kakhulu. Sinenkosi izinguqulo ezimbili, eyokuqala lakhicitwe ngesikhathi kugaselwa "Blackwing Lair", kanti owesibili - kusukela emigodini ye ezwekazini Outland. Ziyahlukahluka kuye ku Umbala umbala kanye balolonge banayo efanayo. Okokuqala wenza ngemibala egqamile phuzi futhi zibe bomvu, kanti eyesibili cishe onsomi ngemivimbo ezincane ezimhlophe. Babukeka umxhwele ifomu ezibukwayo, okungenani zemukeliswe Kudala the original umdlalo. Kuhle kokusho ukuthi onsomi Plate "Zempi wobulungisa 'ayifanele kuphela ikilasi unikezwa, kodwa futhi kwezinye archetypes ukuthi kukhona yalolu hlobo zempi. Enye transmogrification omangalisayo uSeti e WoW Paladin ubhekwa ngokudubula 12, okuyinto inegama "Immolation zempi." Ungazenza kuphela ngesikhathi kugaselwa isiboshwa "Firelands". Kungcono ukuthatha indawo ikumodi nobuqhawe, njengoba lezi zembatho zempi libhekene umbala obomvu. Isigqoko sokuzivikela amahle ingubo obomvu nomhlophe ngamalangabi anguye kuhlanganiswe nomunye.